YouTube ရဲ့ကြည့်ရှုသူအများဆုံး ထိပ်တန်းသီချင်း (၁၀) ပုဒ် - For her Myanmar
ဒီသီချင်းတွေမှ မသိရင် ခေတ်နောက်ကျနေပါပြီနော်.. 😛
ယောင်းတို့ရေ … ဒီတစ်ခါတော့ သီချင်းလေးတွေ အလှည့်ပေါ့နော်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Stella က ယောင်းတို့အတွက် YouTube မှာ လူကြည့်အများဆုံး သီချင်းလေး (၁၀) ပုဒ်ကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ဘာသီချင်းလေးတွေလဲဆိုတော့ …
(၁၀) Ed Sheeran – Thinking Out Loud
Ed Sheeran ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ခပ်အေးအေးပဲသီဆိုထားတဲ့ အချစ်သီချင်းလေးကတော့ ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၂.၇ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတ် (၁၀) နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
(၉) Taylor Swift – Shake It Off
သီချင်းအေးအေးလေးတွေကို အဆိုများတဲ့ Taylor Swift ရဲ့ ခပ်သွက်သွက်သီချင်းလေး “Shake It Off” ကလည်း ယနေ့အထိကြည့်ရှုသူ ၂.၇ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတ် (၉) နေရာမှာပါ။
(၈) Katy Perry – Roar
Katy Perry ရဲ့ အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ ဒီသီချင်းကို မာန်ပါပါဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကြည့်ရှုသူ ၂.၈ ဘီလီယံနဲ့ ထိပ်တန်းနံပါတ် (၈) နေရာမှာ ရောက်နေတာ မဆန်းဘူးထင်ပါရဲ့ ယယောင်းတို့ရေ.. MV ကလည်း ကြည့်လို့ အတော်ကောင်းတာကိုး။
(၇) Maroon5– Sugar
Maroon5ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ။ “Sugar” သီချင်းက ကြည့်ရှုသူ ၂.၉ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတ် (၇) နေရာရောက်တဲ့အထိ ပေါက်ထားပါတယ်တဲ့။
(၆) Justin Bieber – Sorry
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ အသည်းစွဲ Justin Bieber ရဲ့ “Sorry” သီချင်းက ကြည့်ရှုသူ ၃.၁ ဘီလီယံတောင်ရှိတာမို့ နံပါတ် (၆) နေရာမှာပါ။
(၅) PSY – Gangnam Style
Stella တို့ ငယ်ငယ်တည်းက အခုချိန်ထိ PSY ရဲ့ “Gangnam Style” ကိုဆို မသိသူမရှိပါဘူးနော်။ အခုချိန်မှာတော့ ဒီသီချင်းက ကြည့်ရှုသူ ၃.၃ ဘီလီယံနဲ့ YouTube ရဲ့ ထိပ်တန်းနံပါတ် (၅) နေရာမှာ မိန့်မိန့်ကြီးပါပဲ။ သူ့စန်းကလည်း မသေးပါလား …
Related article >>> အသည်းကွဲနေတဲ့ယောင်းတို့ ဖီးလ်နိုင်ဖို့ သီချင်းအကောင်းစား (၅) ပုဒ်
(၄) Bruno Mars ft Mark Ronson – Uptown Funk
ပေါ့ပ်ဘုရင် Bruno Mars ကလည်း နံပါတ် (၄) နေရာကို ကြည့်ရှုသူ ၃.၅ ဘီလီယံရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ “Uptown Funk” သီချင်းနဲ့ သိမ်းပိုက်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
(၃) Wiz Khalifa ft Charlie Puth – See You Again
Fast And Furious ရုပ်ရှင်ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေကို မျက်ရည်ခြူသွားတဲ့ “See You Again” သီချင်းကတော့ ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၄.၁ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတ်(၃) ချိတ်နေပါတယ်။
(၂) Ed Sheeran – Shape Of You
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က လူတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ဖျားက မချလောက်အောင် နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ “Shape Of You” ကတော့ ကြည့်ရှုသူ ၄.၁ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတ် (၂) နေရာရောက်နေပါပြီ။
Related article >>> ယောင်းကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးမယ့် သီချင်း (၆) ပုဒ်
(၁) Luis Fonsi ft Daddy Yankee – Despacito
ကြည့်ရှုသူ ၆.၁ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတ် (၁) နေရာမှာ ဗိုလ်စွဲနေတာကတော့ နေရာတိုင်းမှာ ကြားနေကျဖြစ်တဲ့ “Despacito” သီချင်းပါပဲ ယောင်းတို့ရေ..
ကဲ … ယောင်းတို့ကော ဒီထိပ်တန်းသီချင်းတွေထဲက ဘယ်နှစ်ပုဒ်လောက် နားထောင်ပြီးပြီလဲ ? ဘယ်သီချင်းကို အကြိုက်ဆုံးလဲ ?
ဒီသီခငျြးတှမှေ မသိရငျ ခတျေနောကျကနြပေါပွီနျော.. 😛
ယောငျးတို့ရေ … ဒီတဈခါတော့ သီခငျြးလေးတှေ အလှညျ့ပေါ့နျော။ ဒီတဈပတျမှာတော့ Stella က ယောငျးတို့အတှကျ YouTube မှာ လူကွညျ့အမြားဆုံး သီခငျြးလေး (၁၀) ပုဒျကို မြှဝပေေးသှားမှာပါ။ ဘာသီခငျြးလေးတှလေဲဆိုတော့ …
Ed Sheeran ရဲ့ထုံးစံအတိုငျး ခပျအေးအေးပဲသီဆိုထားတဲ့ အခဈြသီခငျြးလေးကတော့ ကွညျ့ရှုသူပေါငျး ၂.၇ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတျ (၁၀) နရောမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။
သီခငျြးအေးအေးလေးတှကေို အဆိုမြားတဲ့ Taylor Swift ရဲ့ ခပျသှကျသှကျသီခငျြးလေး “Shake It Off” ကလညျး ယနအေ့ထိကွညျ့ရှုသူ ၂.၇ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတျ (၉) နရောမှာပါ။
Katy Perry ရဲ့ အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့ ဒီသီခငျြးကို မာနျပါပါဆိုလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ကွညျ့ရှုသူ ၂.၈ ဘီလီယံနဲ့ ထိပျတနျးနံပါတျ (၈) နရောမှာ ရောကျနတော မဆနျးဘူးထငျပါတယျ။
Maroon5ကတော့ လုပျခလြိုကျပွနျပါပွီ။ “Sugar” သီခငျြးက ကွညျ့ရှုသူ ၂.၉ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတျ (၇) နရောရောကျတဲ့အထိ ပေါကျထားပါတယျတဲ့။
၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ ထှကျရှိခဲ့တဲ့ နှုတျခမျးနီမလေးတှေ အသညျးစှဲ Justin Bieber ရဲ့ “Sorry” သီခငျြးက ကွညျ့ရှုသူ ၃.၁ ဘီလီယံတောငျရှိတာမို့ နံပါတျ (၆) နရောမှာပါ။
Stella တို့ ငယျငယျတညျးက အခုခြိနျထိ PSY ရဲ့ “Gangnam Style” ကိုဆို မသိသူမရှိပါဘူးနျော။ အခုခြိနျမှာတော့ ဒီသီခငျြးက ကွညျ့ရှုသူ ၃.၃ ဘီလီယံနဲ့ Youtube ရဲ့ ထိပျတနျးနံပါတျ (၅) နရောမှာ မိနျ့မိနျ့ကွီးပါပဲ။ သူ့စနျးကလညျး မသေးပါလား …
Related article >>> အသညျးကှဲနတေဲ့ယောငျးတို့ ဖီးလျနိုငျဖို့ သီခငျြးအကောငျးစား (၅) ပုဒျ
ပေါ့ပျဘုရငျ Bruno Mars ကလညျး နံပါတျ (၄) နရောကို ကွညျ့ရှုသူ ၃.၅ ဘီလီယံရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ “Uptown Funk” သီခငျြးနဲ့ သိမျးပိုကျထားတာကို တှရေ့မှာပါ။
Fast And Furious ရုပျရှငျရဲ့ ဇာတျသိမျးပိုငျးမှာ ပရိသတျတှကေို မကျြရညျခွူသှားတဲ့ “See You Again” သီခငျြးကတော့ ကွညျ့ရှုသူပေါငျး ၄.၁ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတျ(၃) ခြိတျနပေါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈနှဈလောကျက လူတိုငျးရဲ့ပါးစပျဖြားက မခလြောကျအောငျ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ “Shape Of You” ကတော့ ကွညျ့ရှုသူ ၄.၁ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတျ (၂) နရောရောကျနပေါပွီ။
Related article >>> ယောငျးကို စိတျဓာတျခှနျအားတှပေေးမယျ့ သီခငျြး (၆) ပုဒျ
ကွညျ့ရှုသူ ၆.၁ ဘီလီယံနဲ့ နံပါတျ (၁) နရောမှာ ဗိုလျစှဲနတောကတော့ နရောတိုငျးမှာ ကွားနကေဖြွဈတဲ့ “Despacito” သီခငျြးပါပဲ ယောငျးတို့ရေ..
ကဲ … ယောငျးတို့ကော ဒီထိပျတနျးသီခငျြးတှထေဲက ဘယျနှဈပုဒျလောကျ နားထောငျပွီးပွီလဲ ? ဘယျသီခငျြးကို အကွိုကျဆုံးလဲ ?
Tags: Entertainment, most viewed, Music, music video, Song, Top Ten, youtube
မိုးရာသီမှာ ဖက်ရှင်မဂွမ်းစေရအောင် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဖိနပ် (၄) ရံ